Drafitra ravina lamaody vita amin'ny polyester ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, China
Drafitra ravina polyester vita amin'ny ravina lamaody ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
● lambam-baravarana amboradara Wave Point, 100% polyester, habe namboarina.
● Fitaovana goavam-be: manaova sarina lamba somary matevina miaraka amina fanjairana tsara, voadio ary malefaka amin'ny fikasihana.
● Drafitra tsy manam-paharoa: kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny peta-kofehy miaraka amin'ny hatsaran-tarehy tsotra sy ny endrika maodely nefa tsara tarehy manampy endrika sy fahamendrehana ao amin'ny efitranonao, manaova endrika malefaka sy maoderina amin'ny varavarankelinao.
● SORATRA MAZAVA: Ireo lambam-baravarana amboradara ravina ireo dia manome jiro, tantaram-pitiavana sy rivotra be amin'ny efitrano iray amin'ny alàlan'ny famelana ny tara-pahazavana malefaka hikoriana mandritra ny fiainanao manokana.
● SERVE WELL: Misy amin'ny habe sy loko isan-karazany, mety amin'ny efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fisakafoana, efitrano ho an'ny zaza, efitranon'ny ankizy, akanin-jaza, birao, hotely na toeram-bahoaka hafa.
● MORA miditra mora foana ary mikarakara: 3 "paosy paosy dia mora ahantona amin'ny tsorakazo fanaingoana na haingon-trano. Masinina azo sasana amin'ny rano mangatsiaka, tsingerina malefaka, maina. Vy mangatsiaka raha ilaina.
Product Name Drafitra ravina polyester vita amin'ny ravina lamaody ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny